भिडियो: उपयोगिता बनाम डिजाइन
डिजाईन बनाम उपयोगितामा एक भिडियो
बिहीबार, जुन 10, 2010 बिहीबार, अक्टुबर 29, 2015 Douglas Karr
जोन अर्नोल्डले अचम्मको काम गर्छ कि उसको फर्मले के गर्छ, ट्युटिभ = उपयोगीता। त्यहाँ केही अविश्वसनीय अनुप्रयोगहरू छन् जुन दिनको उज्यालोमा कहिल्यै देख्दैनन्। अनुप्रयोगले केहि धेरै गाह्रो समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ, तर यदि कसैले वास्तवमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पत्ता लगाउन सक्दैन भने, त्याग उच्च हुनेछ र बिक्री गाह्रो हुनेछ।
ब्रान्डि manage प्रबन्धकहरू, उत्पाद व्यवस्थापकहरू र ग्राफिक डिजाइनरहरू प्राय: कुनै अनुप्रयोगको हेराई र भावना निर्धारण गर्छन्। उपयोगिता प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित गरिन्छ, यद्यपि! उपयोगिता विज्ञहरूले सफ्टवेयरको साथ अन्तर्क्रियाको अवलोकन गर्छन् र अनुकूलन गर्दछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यो सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ। उत्तम भिडियो.
ट्युटिभले निम्न सेवाहरूको प्रस्ताव गर्दछ:
प्रयोगकर्ता अनुसन्धान - "तपाइँका प्रयोगकर्ताहरूलाई चिन्नुहोस्, किनकि तिनीहरू तपाइँ होइनन्।" एक अस्पष्ट कल्पना "प्रयोगकर्ता" को लागी डिजाईन गर्नुको सट्टा हामीलाई तपाईको प्रयोगकर्ताको सही आवश्यकता, आचरण र लक्ष्यहरु खोलौं।
अन्तरक्रिया डिजाइन - अन्तर्क्रिया डिजाईन त्यो हो जहाँ तपाईका प्रयोगकर्ताहरूका लक्ष्यहरूका ज्ञानलाई अर्थपूर्ण र प्रयोग-गर्न-सजिलो कार्यक्षमतामा अनुवाद गरिन्छ।
प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस डिजाइन - राम्रो डिजाइन कहिलेकाँही कलात्मक सृजनात्मकताको सौन्दर्य र अन्य समयमा सरलताको सौन्दर्य हुन सक्छ। हामी यो सहि छौं, र एक तरीकाले तपाईंको समग्र ब्रान्ड रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्दछौं।
वेब डिजाइन - हाम्रो प्रयोगकर्ता-केन्द्रित डिजाइन प्रक्रिया वेबसाइटहरूका लागि आदर्श हो जुन अनलाईन ब्रोशर भन्दा बढि हुनु आवश्यक छ।
उपयोगिता परीक्षण - अनुमान गर्न रोक्नुहोस्। हाम्रो उपयोगिता परीक्षणले कुन दृष्टिकोणहरू प्रभावकारी र कुनलाई अधिक परिणामहरूको लागि परिष्कृत गर्न सकिन्छ प्रमाणित गर्नेछ।
जोन अर्नोल्डको जाँच गर्नुहोस् शानदार ब्लग.
टैग: सहजजोन अर्नोल्डउपयोगिताप्रयोगकर्ता अनुभव
व्यवसायका लागि, नयाँ मिडिया सजिलो छैन
इन्टरनेट फ्ल्यास बिना राम्रो चलाउँछ